Tsy nilamin-tsaina intsony ny mponina. Antony, misy fiantraikany eo amin`ny sehatry ny asa sy ny fianarana izany. Voalaza fa manala baraka fotsiny ny sefom-pokontany ka tsy tokony namely tsaho, hoy izy ireo. Ireo mpiasa miasa amin` ireo “zone franche”dia nalefa nody. Nampodiana ihany koa ireo mpianatra. Marihana anefa raha ny tatitra voaray raha eto Antananarivo Renivohitra dia ny faritra ao Soavimasoandro no tena ahitàna tranga betsaka indrindra. Dimy ny tranga voamarina ny 03 lasa teo ka niampy iray ny ampitso. Antony namoahan` ity sefom-pokontany izany antontan` isa izany. Omaly ihany koa dia nanamarina izany tarehimarika izany ny profesora Vololotiana Hanta. “Nitombo hatrany ny olona voan` izany. Amin`ireo olona 22 voa eto Antananarivo, misy zaza miisa 09 avy amin`ny fokontany Mhatony, Soavimasoandro, Alarobia ary Alarobia Amboniloha”. Raha ny fanirian` ireo mponina eny an-toerana dia miandrandra fitiliana faobe amin` ireo fokontany nahitàna tranga be indrindra izy ireo.